Fiaraha-miasa amin'ny kaody miaraka amin'ny Squad | Martech Zone
Fiaraha-miasa amin'ny kaody miaraka amin'ny Squad
Alahady, Desambra 20, 2009 Sabotsy, Oktobra 20, 2012 Douglas Karr
Squad dia ny fampivoarana ny Google docs dia ny suite suites. Miaraka amin'ny Squad, ekipa fampandrosoana mivelatra manerana an'izao tontolo izao dia afaka manokatra rakitra mitovy aminy, miasa aminy miaraka, ary miresaka momba ny fanovana. Tsy misy intsony ny fivoriana famerenana kaody lava misy ny ekipa mandehandeha, mifampita fanovana, manambatra ary mifandona amin'ireny fanovana ireny… Manisy ezaka ny Squad raha tsy misy ezaka.
Squad dia tranonkala, lozisialy ho vahaolana amin'ny serivisy, izay mahazaka lafo tokoa. Raha mpampiasa tokana ianao dia azonao ampiasaina maimaim-poana! Ho an'ny $ 39 / volana dia azonao atao ny mahazo fonosana ekipa hatramin'ny mpikambana 5.
Tags: code editorfiaraha-miasaandiana
Ireo fitaovana sy rindranasa mitazona ahy amin'ny orinasa